को बन्ला कांग्रेस सभापति : अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा देउवा की प्रकाशमान ? | Diyopost - ओझेलको खबर को बन्ला कांग्रेस सभापति : अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा देउवा की प्रकाशमान ? | Diyopost - ओझेलको खबर
को बन्ला कांग्रेस सभापति : अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा देउवा की प्रकाशमान ?
दियो पोस्ट शनिबार, मंसिर २५, २०७८ | १३:०८:१९
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि शुरु भएको नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको नेतृत्व (सभापति) को हुने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी छ ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सभामै प्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई भोट दिएर जिताउन माग गरे । शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै सभापति देउवाले ‘केपी ओली शासनबाट मुक्त पारेपछि जनताले मुक्ती पाएको दाबी मात्रै गरेनन् अब बन्ने सबै तहको सरकारको नेतृत्वका लागि पनि देउवालाई जिताउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पार्टी सभापतिका लागि कांग्रेस भित्र देउवा बलिया दाबेदार हुन् । तर, उनका निकटस्थहरु नै यतिबेला देउवासँग छैनन् । लामो समयदेखि देउवासँगै रहेका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आफै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिदिएका छन् । कांग्रेस भित्र भारत ‘फ्याक्टर’को भूमिका अति शक्तिशाली हुने बताइन्छ ।
भारतीय शक्तिकेन्द्रको निकट मानिने विमलेन्द्रले देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गर्नु र रामचन्द्रलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुले देउवामाथि भारतको भरोसा नभएको पुष्टि गर्छ ।
त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतले निम्तो समेत दिएको छैन । तर, प्रधानसेनापछि प्रभुराम शर्माले भारत भ्रमण गरेर आइसकेका छन् । अर्थात भारत देउवाको विपक्षीमा छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यद्धपी भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सबै पक्षलाई काँधमा हाल्ने गर्दछ । अन्तिममा जसको जित हुन्छ उसैलाई हामीले जितायौँ भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षको दाबी छ ।
देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा यसअघि परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशशरण महतलाई भारत पठाएका थिए । सहमहामन्त्री समेत रहेका महत, उदय शम्शेर राणा र अजय चौरासियालाई लिएर उनी दिल्ली पुगेका थिए । देउवाका विशेषदूत बनेर गएका उनलाई त्यहाँ विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवालेले मात्रै भेट दिएका थिए । यद्धपी सत्ता र शक्तिकै आडमा देउवा कांग्रेस महाधिवेशनमा शक्तिशाली उम्मेदवार हुन् भन्दा अन्यथा नहोला ।
जबकी गत कार्तिक अन्तिम साता बर्दियाबाट सुटुक्क भारत तर्फ प्रस्थान गरेका सभापतिका दाबेदार प्रकाशमान सिंहले दिल्लीमा भाजपा अध्यक्ष जगतप्रकाश नाड्डालाई मात्रै भेटेनन् नरेन्द्र मोदीपछिको शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाहलाई पनि उनले भेटेको सुत्रहरुको दाबी छ । बर्दियामा गणेशमानको शालिक अनावरण गरेपछि उनी त्यतैबाट दिल्ली हानिएका थिए । कांग्रेस भित्र प्रकाशमान ‘फ्याक्टर’ बलियो बन्दै गएको चर्चा समेत छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिको केन्द्रमा रजगज गर्दै आएको भारतीय पक्षलाई रिझाउन कांग्रेस महामन्त्री शंशांक कोइरालाले कोशिस नगरेका होइनन् । तर, दिल्लीमा उपचार गराइरहेका प्रदीप गिरीलाई भेट्ने बहाना बनाएर भारत पुगेका शशांकलाई विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवालेले मात्रै भेट दिए ।
उनीमाथि नेपालमा भारतीय जनता पार्टीले भिराइदिएको ‘हिन्दुराष्ट्र’ एजेन्डा बोकेको आरोप छ । उनले सभापतिका लागि रामचन्द्र पौड्याललाई ठाउँ छाडिएको भन्दै सभापतिको उम्मेदवारीबाट हात उठाइसकेका छन् ।
यता रामचन्द्र पौड्याललाई भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको भरोषा नभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीमा एक्लै ८ पटकसम्म चुनाव लडेका उनी १७ पटकसम्म चुनाव हारेका थिए । कांग्रेस भित्र उनलाई ‘हुती नभएको नेता’ भन्न थालिएको छ । बन्दशत्र शुरु हुनै लाग्दा समेत पौडेल समुहले सभापतिसहित उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । सर्वसहमतिको उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेपछि उनले सभापतिको दौडबाट पछि हटेका छन् ।
यता सभापतिका दाबेदार शेखर कोइरालामाथि पाकिस्तान तर्फ ढल्किएको आरोप छ । पार्टी भित्र उनीमाथि यो आरोप एउटा तप्काले जबरजस्त लगाइरहे गर्छ ।
कांग्रेसको राजनीतिमा निकै लामे समय सक्रिय एक कार्यकर्ताका अनुसार महाधिवेशनमा अन्तिम प्रतिष्पर्धा प्रकाशनमान र शेरबहादुर देउवाबीच नै हुन्छ ।
‘गणेशमानको परिवारले जहिल्यै त्याग र निष्ठाको राजनीति गर्यो भन्ने छ । प्रकाशमानले यसपटक निकै दह्रो अडान लिएको देखिन्छ । उनले उम्मेदवारी नछोड्नु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले सिंहलाई नै भरोसा गर्नुमा केही त पक्कै छ,’ ती नेता भन्छन्,‘यता शेरबहादुर पनि बलिया उम्मेदवार हुन् । उनीसँग सत्ता छ । शक्ति छ । लामो समयदेखि पार्टी भित्रको सत्तामा पनि उनै छन् । बाहिरको सत्तामा त उनी प्रधानमन्त्री नै छन् । अब प्रतिष्पर्धा यी दुईको नै हुन्छ । को सभापति बन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस कार्यकर्ताको विवेकमा भर पर्छ ।’
शनिबार, मंसिर २५, २०७८ | १३:०८:१९